Ingxelo eyimfihlo yaseMelika Idatha yesifo saseTshayina? UTrump: Akukho ngxelo ifunyenweyo Abavelisi kunye nabaThengi-fektri baseChina - iQuanzhou waimaoniu yokuNgenisa nokuThengisa ngaphandle, Co, Ltd.
Njengoko ubhubhane wesithsaba esitsha se-pneumonia kumazwe aseYurophu naseMelika uqhubeka ngamandla kwaye uxinzelelo lwasekhaya luphantsi koxinzelelo ngenxa yokuphendula okungalunganga, iChina iye yaba yinto ekujongwa kuyo "ukuhlaba umkhosi iipani" kwilizwe ngalinye, nokunyelisa idatha yaseTshayina "ngobuqhetseba" yenye ye-ajenda.
Ngokwengxelo ye-US Consumer News and Business Channel (CNBC) nge-1 ka-Epreli, iBloomberg News ngaphambilana icaphule amagosa amathathu e-US athi kwingxelo eyimfihlo yokuba uluntu lwe-US intelligence luye lwathandabuza inani lokuxilongwa kunye nokufa kwe-pneumonia entsha yesithsaba eTshayina kwingxelo eyimfihlo.
Ngenxa yoko, eli bango lahlatywa nguMongameli wabo uTrump, othe yena kwingqungquthela yabezindaba wathi akazange afumane ngxelo ngalo bhubhani eTshayina.
"Sazi njani ukuba (i-China) igqithiselwe okanye i-underreport," uTrump waphendula ephendula imibuzo malunga nokuphuma kwedatha e-China: "Andinguye i-accountant yase China."
UTrump uyakuphika ukubakho kwengxelo ebizwa ngokuba yimibuzo malunga nokuqhekezwa kweenkcukacha eChina
Ngokwezibalo zexesha lokwenyani ezivela kwiYunivesithi yaseHopkins eMelika, ukusukela nge-9: 43 nge-2 ka-Epreli, ixesha laseBeijing, inani elongezelekayo lamatyala aqala ngqiqweni eUnited States afikelele kwi-210,000, afikelela kuma-215,417, elongezelekayo inani lokusweleka yayingama-5,116, kwaye inani elongezelekayo lamatyala anyangelweyo angama-8,474. . Inani elisanda kuxilongwa kunye nokusweleka kwabantu e-United States lifikelele kwinqanaba eliphezulu kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo, kwaye inani elongezelekayo lokuxilongwa kunye nokusweleka lidlula idatha kwi-China (kubandakanya iHong Kong, Macao kunye neTaiwan) (iyonke Zingama-82,591 izifo eziqinisekisileyo zokuxilongwa kunye nokufa okongezelekayo). Amatyala ayi-3321 ewonke).
Iinqwelomoya zokuhambisa zaseMelika zithwele iimpahla zonyango zaseTshayina
Ukwenza "iigusha ezifileyo", i-United States yaqala ukuthutha ngokungxamisekileyo iimpahla zonyango zivela e-China, kwaye "iinkonzo ezikhethekileyo" zanceda urhulumente welizwe. Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-Matshi, inqwelomoya eyayisuka eShanghai yabe ilayishwe iilitha ezili-130,000 zeemaski ezingama-N95, iimaski ezisisi-1,7 sezigidi, kunye neeseti ezingama-50 000 zempahla yokuzikhusela kunye nezinye izixhobo zokhuselo. Ezi ziinqwelo moya zokuqala ukufika eNew York phantsi komcebisi omkhulu weWhite House, inkqubo kaTrump yomkhwenyana kaxakeka kaxakeka, iprojekthi yeAir Bridge.
Kodwa nangona kunjalo, ukuqhayisa ngemibuzo eqhawukayo neTshayina lihlabathi lasentshona, ekhokelwa yi-United States, akukaze kunqunyulwe, kwaye izinto ezibizwa ngokuba "ziimfihlo zaseTshayina" kunye "nobuxoki baseTshayina" zihlala zihanjiswa. Kusuku nje olunye ngo-Epreli, kwindlu yethu yozakuzo e-France kunye nozakuzaku wase-Bhritane bawagxotha ngempumelelo amanqaku angenangqondo ngamajelo eendaba ase-France kunye namajelo ase-Bhritane achaphazela impumelelo ye-China yokulwa nobhubhane.
Xa kujikwa izityholo ezingafunekiyo ezivela kumajelo eendaba aphesheya, iWorld Health Organisation (WHO) yadibana ngomhla wokuqala kwinyanga kaTshazimpuzi, ichaza ukuba kukho inani elikhulu leempapasho ezisisiseko zobungqina ezenzelwa e-China nakwezinye iindawo mihla le. Sukubonakalisa ukuba yinxalenye yehlabathi ukungavumi ukusebenzisana okanye ukuba-opaque Ngolwazi lolwazi lokuphalaza intsholongwane yehlabathi, kukho eJamani, enye eSingapore, enye e-United States, kwaye ezine e-China.
Ingoma uLuzheng, umbhali we-Observer.net kunye nomphandi kwiZiko loPhando laseTshayina kwiYunivesithi yaseFudan, ukwacacisile kudweliso lweDayari yaseParis ukuba idatha yaseChina yeyona nto igqibeleleyo nethembekileyo, kokubini ngokwamandla kunye nemigaqo-nkqubo yovavanyo. Ngokwendlela yokujonga, ikwayeyona nto ibhekisele kuyo. Idatha epapashiweyo yaseNtshona ayibandakanyi abantu abarhanqwayo, abathobekileyo, okanye nabantu abango-asymptomatic. Ukuchaneka kwayo kubi kakhulu kuneyase China.
Nangona kunjalo, yintoni engaqondakaliyo kweli lizwe kukuba i-China ayityholanga idatha yeNtshona ukuba ayichanekanga, kodwa i-West iyayibetha ngokufanelekileyo. "